WARBIXIN: Dowladda Federaalka Ah Oo Lagu Leeyahay 8 Bil Oo Mushaar Ah | Baled Weyn Media Center
WARBIXIN: Dowladda Federaalka Ah Oo Lagu Leeyahay 8 Bil Oo Mushaar Ah
Shaqaalaha Dowladda federaalka ah, Ciidan iyo rayidba waxaa ay dowladda federaalka ah ku leeyihiin mushaar 8 bil ah, sidaasi waxaa lagu ogaaday baaritaan la sameysay .
Ciidamada Militariga iyo Booliiska waxaa ay sheegeen in 3 bil aaney qaadan mushaar, Macalimiinta Jaamacadda umadda oo shaqo-joojin sameeyay todobaadkan waxaa ay ku doodeen in 5 bil aaney arag mushaar!
Mid ka mid ah shaqaalaha dowladda federaalka ah waxay sheegtay in sanadkii hore oo ay shaqaale ka aheyd mid ka mid ah wasaaradaha dowladda, iyada oo dowladda ku tabeysa mushaar 6 bil ah, hadda oo ay Xildhibaan federaalka ah tahayna 2 bil, isku dar lacagta ka maqan 8daas bil, waxaa ay ku sheegtay 10 Kun oo Dollar.
Iska daa ciidanka iyo shaqaalaha rayidka ah, dowladda federaalka ah waxaa ay u baahan-tahay 6 Milyan oo Dollar si ay u bixiso mushaarka 275 Xildhibaan oo dowladda ku leh mushaarka 8 bil.
Waxaa xusid mudan in shaqaalaha cusub ee dowladda federaalka ah qaadatay wixii ka dambeeyay doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo aaney weli aysan qaadan wax mushaar ah, qaarkood waxaa ay sheegeen in aaney jirin rajo ka sokeysa Janaayo 2018-ka.
Ra’isul wasaaraha Soomaaliya waxaa shacabka u sheegay in iska daa mushaare uu xitaa bixin-doono lacagta ay xafiisyada dowladda ku shaqeeyaan “Sanadka 2017 bisha December 31 haddii uu ilaahey idmo waxaan ku soo dhameystiri doonaa halkaana waan ka sheegayaa, haddii aad dowladda aad u shaqeyso, inaad mushaarkaagii heshay Janaayo –December. Haddii aad ka shaqeyso xafiis dowladeedna aad heli-doonto lacagta xafiiskaada u ku socdo, oo aad xaqa u leedahay, waxaan ku darayaa in maamulka ani iyo madaxweyne Farmaajo aan mas’uulka ka nahnay in aanu 2017 in aan qarash deyn ah uusan dalka Soomaaliya u keeni doonin”.